Myanmar OA6: P.S (1)
Posted by Mr.Pooh @ မောင်ပွတ် at 3:11 PM
ဒီလိုမျိုးလေးတွေကို ဖတ်ရတာ အကျိုးရှိပါတယ်။ အပျင်းလည်းပြေ၊ အကျိုးလည်းရှိစေတဲ့ နောက်အပိုင်းလေးတွေ စောင့်ဖတ်ကြရအောင်ပါ။ ဒါမျိုးလေးတွေ များများတင်ပေးပါနော်။
p.s. ဆိုတဲ့ စကားလုံးအဓိပ္ပါယ်ကို ရှာကြည့်လို့တွေ့တာလေးပါ ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။
p.s. = Postscript,amessage at the end ofaletter or other piece of writing. "Post-" = after; "script" = writing.
Post Scriptum in the ancient Roman tongue, which is why it's two letters, even though our English word postscript has become one word.